Musa ukubheka njengendoda endala kwi-campus. Okanye i-cougar!
Uhamba ngaphesheya kwenkampu kwaye uncumo kubantwana abathi, inxalenye enkulu, bangaba ngabantwana bakho, nabazukulwana bakho. Ukugubha okukhulu. Okungangoko unqwenela ukungena kulo (kwaye unako!), Ukugqoka oko bembetheyo akuyona indlela. Landela la macebiso ayisihlanu uze uzigcine unentloni. Oko kuthetha amandla angakumbi okuchitha ixesha ekufundeni!
Ungase uqale ngezinto eziphezulu ezi-5 ezikhuselekileyo umfazi okhulileyo akufanele akhonze kuCynthia Nellis. Uya kufumana ukukhaba kweengcebiso ezifundwa ngabafundi bakhe.
Ungabi nesikhumba esikhulu kakhulu.
Umthombo wesithombe - Getty Images 75941462
Mhlawumbi ubenxibe i-miniskirt ngexesha lokugqibela esikolweni. Kwaye ndiqinisekile ukuba unemilenze yawo emva koko. Nangona imilenze yakho ishushu, i-miniskirt iya kukhangela nje ukuba ibukeke njenge-cougar ngeli xesha. Ukuba awukwazi ukuba i-cougar ikuphi kwi-campus, awufuni ngempela ukugqoka i-miniskirt.
Ukuba ufuna ukugqoka i-skirt, enokuyonwaba ngokwenene, khetha into epheleleyo kunye nobude bamadolo. Iintlanzi ziya kulonwaba, nazo.
Iingcebiso ezifanayo zokuqwashisa zenza i-jeans and / okanye i-jeans ephakamileyo. Uyazi abo ... umgca onqeni uhla ngqo ngaphaya kwendawo ye-pubic. Ndiza kuphuma kwisigxina apha kwaye ndithi, ngombono wam, eso simboko asikho kwi-campus nakwi-20 ubudala ubudala. Akukho mntu ufuna ukumbona i-midriff engabonakaliyo eklasini, ingakumbi xa i-midriff ineminyaka engamashumi eminyaka ubudala okanye ingekho kwindawo efanelekileyo. Uyayazi ndithetha ukuthini.
Ungazami ukujonga 20 ngokugqoka iifashoni ezingamashumi amathathu.
UDavid McGlynn - Ukhetho lwezithombe - Getty Images 200411217-001
Asitsho ukuba ufanele ugqoke i-polyester kunye nezicathulo ezinengqiqo, kodwa ugqoke iifowuni ezingama-20 xa uneminyaka engama-40 okanye ngaphezulu uzuze ukujonga kwakho ubuhlungu. Unokuze uve neentetho ze "nto ephosakeleyo." Akukho mntu ufuna oko.
Unokujonga ngendlela enokwenza imodeli kungakhathaliseki ubudala bakho. Isitshixo kukuba ukhethe izitayela ezithatha ixesha lakho kunye nesimo sakho. Mayelana neFashion kusinceda apha:
Yintoni yokugqoka ngaphezu kwama-40
Yintoni onokugqoka ngaphezu kwama-50
Musa ukugqoka ii-pajamas ngaphandle kokuba ufunde eklasini lakho lokulala.
URolf Sjogren - Getty Images
Iipasama zingase zikho, kodwa nceda ungazigqoki eklasini ngaphandle kokuba uhleli kwigumbi lakho lokuhlala uthatha iklasi ye-intanethi . Andikhathalele ukuba wonke umntu uthi i-pajama ibhulukwe ingaphakathi. Ingaba iyanelisekile, ingaba ikhona, kodwa iphinda ixakeke kuluntu.
Ukuba ufuna ukuthathwa ngokungathí sina, ngaba imifanekiso yepajama yakha imifanekiso oyifunayo ngokwenene? Andiyiqondi.
Ungadluli i-makeup yakho.
I-Jupiterimages - Getty Images
I-eyeshadow ebomvu ingaba ilungele namhlanje, kodwa xa ukhetha ukuhamba ngamathoni e-jewel kwiibhontshi zakho, khumbula ukuba zonke iimpepha zakho mazibe zilula. Isikhokelo soBumnandi uJulyne Derrick ubhala malunga nomcimbi othi "Ngaba kulungile ukuGqoka i-Green Eyeshadow?"
Ukuba ukujonga omncinci kwi-campus kuyinjongo yakho, ngaphandle kokufunda, Kakade, iJulane inezinye iingcebiso malunga nawe: Indlela Yokujonga Umncinci: 8 Iingcali Ndizifunga.
Musa ukuthwala isikhwama esincinci.
Okuchasene nale nto ibonakala "uluhlu" lwethu. Sifuna ukuphindaphinda kabini kwiingcebiso kuba luleko oluhle. Ukunyamekela ukuthwala iincwadi, i-laptop, isikhwama, ifowuni yakho, kunye nantoni na enye into oyifunayo nawe imini okanye kusihlwa , intlanzi mhlawumbi, yinto ebodwa abantu baya kuphawula ngawe. Akunakukhathalela oko ugqokeyo xa unxibezela ngaphesheya kwe campus ulahla izinto.
Fumana isikhwama sephepha okanye isikhwama esenziwe ngesitayela esilungileyo esifanelekileyo, isikhwama esibamba yonke into oyifunayo. Uza kujonga uhlakaniphile, ulungelelanise, kwaye udibanise kunye.
Iindlela ezili-8 zokubonisa imilinganiselo yokufunda yomntwana wakho
Iindlela ezi-5 zokufunda kwi-Age yakho yesithathu
Isizathu sokuba Ufanele Ubhale Iindlela Ezivivayo Xa Ufunda
Isaziso soKhuseleko lweNkqubo lukwazisa abazali bamaLungelo abo
Amanqaku Afonisayo kunye neeNkcazo zokuThuthukisa
10 I-Octopus Facts ekhangayo